-Line Full Izixhobo
Iparameters Technical: Five-yima Tandem Cold Rolling Mill
Rolling Mill Housing Isakhelo - Laser khazi Remanufacturing
Ukuziqengqa isakhelo yezindlu lokusila kubizwa ngokuba lokusila kuma lothuli, nto leyo isetyenziselwa ukufaka ahambise, mqengqeleki ngokuzala, mqengqeleki isixhobo hlengahlengiso, kukhokela izixhobo, njalo njalo kunye nayo i candelo umthwalo-ethwele ebalulekileyo izixhobo onenombolo. It yenziwe castings yentsimbi eziqhelekileyo kunye nenkqubo yayo eziwisela umisela ukuba umphezulu umzimba akanawo amandla aphezulu, nokumelana kunye nezinye yokusebenza. iziphumo ukulayisha impembelelo eqhubekayo deformation esisigxina enxulumene kufanelekile ukuyinyusa iindawo selitye onenombolo, elingumthombo, oko ngakumbi zimbi ngenxa umhlwa izixhobo, nto leyo ebangela ndawo engachananga yokuqaliswa ukusebenza kunye umqulu backup kunye nentshukumo ngokugqithisileyo uluhlu sithwele swi kwi kaloliwe ukuma lokusila, iyenza nzima ukulawula ngempumelelo kugqitywe phakathi isakhelo lokusila yezindlu nomnombo umqulu bethwele swi.
Sifeza on-site ukulungiswa kunye remanufacturing le thaca isakhelo yezindlu okusila ngokusebenzisa lokulinganisa laser and tracking izixhobo, izixhobo ezizodwa machining mobile for on-site yokulungisa kunye nezixhobo laser khazi mobile, banayo iingenelo ngendlela ophezulu ukulungiswa, wear elungileyo bokuxhathisa kwaye nokumelana ze umaleko khazi, flatness egqwesileyo kunye nokugqiba kakuhle ujongise, ngoko, ubomi inkonzo yesakhelo lokusila yezindlu lothuli ukuba ngcono kakhulu, lo ngendlela onenombolo kuqinisekiswa kunye nomgangatho imveliso iphuculwe.
High ukuchana ntathu after repair of the rolling mill housing frame
Kunye nolwamkelo on-site maholo zesixhobo kumatshini, laser khazi yi isixhobo kumatshini endaweni eneqikili on-site kugqityiwe isixhobo umatshini emva laser khazi, kuba waphula indlela yokulungisa yemveli yokususa isixhobo machine emva kwi- site maholo, ukufaka eneqikili ngenxa laser khazi, ukhupha eneqikili nasekuphumezeni wokucoca manual emva laser khazi. Emva ukulungisa, ngesidanga ekugqibeleni, ukuchaneka ntathu kunye nonyamezelwano zejometri le thaca isakhelo yezindlu lokusila kuya kuba 100% kubuyiselwa iimfuno yasekuqaleni.
Akhona eXcellent cladding performance of the rolling mill housing frame
inkampani yethu liqulunqe ngumgubo ezikhethekileyo Iingqameko eliphezulu anti-umhlwa, strong ukumelana kukuwohloka bobuso. It elisombulula ingxaki lokondla xi kwaye uthintele nokuqhekeka kwi ukuqaqadeka umaleko ngenxa kakhulu kuphuculo ithambeka yobulukhuni. Ngenxa kwakhona lokuvelisa kunye nokulungiswa, umsebenzi kwezixhobo ezakunyuswa kakuhle. I yonyaka lingonakali ilahleko wobuso yeyona ≦ 0.05 mm / unyaka kunye nobomi nkonzo yiminyaka ≥10.
Full ulawulo ubomi umjikelo yesakhelo yezindlu lokusila lothuli
Senze iphuhlise isicwangciso epheleleyo yolawulo ubomi umjikelo yesakhelo yezindlu lokusila lothuli kuquka uvavanyo, uxilongo, uthethwano iqela ingcali, ngokutsha, izisombululo zobugcisa, ucikizeko olukhulu kunye nokusebenza yokulinganisa, ukuphunyezwa intanethi, ulondolozo ukulandela-up status. Le mveliso iya kulungiswa ngendlela ophezulu ezikumgangatho kunye nangendlela ophezulu-kakuhle ngokusekelwe kwisicwangciso somsebenzi womnatha eneenkcukacha.
Laser Remanufacturing of Drive Shaft, waphumela Plate ...
Laser Remanufacturing of Drive Shaft, Plate asinde Kwaye Okunye Product Series
Laser additive remanufacturing technology (laser nokufumba lemveliso ubugcisa LMD) ukuba idipozithi umaleko obhityileyo ngentsimbi kumbandela isiseko ngokusebenzisa laser nobushushu. It has iingenelo igalelo eliphantsi ubushushu of zeendawana, impembelelo encinane ubushushu, izinga zokupholisa eliphezulu, ubungakanani ezineenkozo ezincinane, nisondelelane metallurgical, amandla aphezulu nimanyane, njl
Ukuqaliswa iimveliso laser khazi of Taier
Uphumile plate ababetheki: isixhobo ababetheki asinde ukujika eshushu oluqhubekayo efakwe kwi nakumphezulu back-up roll swi kunye lombhobho AGC ukuphumeza umsantsa incwadi esongwayo, besabelana hlengiso lwe thaca okusila kunye ipleyiti ubukhulu ulawulo ukumelana umahluko okhoyo ubukhulu imiqulu ezahlukeneyo. Siye baye laser khazi ezobuchwepheshe ukuze athethe ipleyiti umphezulu remanufacturing asinde, ngale ndlela, umlo kukuwohloka nokumelana ziphucukile kakhulu, kwaye nobomi inkonzo linyuke izihlandlo ezingaphezu kwama-5 xa kuthelekiswa ucimayo yesiqhelo.
Drive shaft: i drive isikhondo elayinini imveliso intsimbi kaloliwe kakhulu iqulunqwe phakathi kokuxhuma isikhondo, edibeneyo, flat intloko umkhono kunye namanye amacandelo aphambili; phantsi bume ukusebenza lobushushu eliphezulu, ukufuma aphezulu kunye namandla eliphezulu, iindawo ezinxulumene nokuba kakhulu ngumhlwa, ezigugileyo nezonakeleyo. Sakha laser khazi iteknoloji ukuqhuba laser khazi remanufacturing nokulungiswa amacandelo angundoqo shaft drive kunye kugunyaziso yeemveliso ezintsha, kwaye uzinzo kunye nenkonzo nobomi iimveliso iyaphuculwa kakhulu.
Imifanekiso yeemveliso laser remanufacturing